Inkqubo yokuThintela ukuwa / ukujikeleza-iZisombululo ze-OMG
Ukuphelisa ingxolo yomsindo we-alamu
Isebenza ngemigangatho yokulala engenazintambo, izihlalo zesikhewu, izitila zomgangatho kunye nezinto ezingenazintambo ezivumela ukuba i-monitor eseleyo ibekwe kwisikhululo sobuhlengikazi-kude nomhlali, ngaloo ndlela ikhuphe ingxolo ye-alamu yendawo.
Umncedisi angakwaziswa kwakhona nge-pager ebonisa ukuba inzwa yenze njani isilumkiso. Oku kunceda umnakekeli ukuba abe khona kwiminye imisebenzi kodwa angacetyiswa xa umhlali efuna uncedo.
Yazi ofuna uncedo
I-Monitor Monitor igxininisa umnakekeli kwisikhululo seonesi okanye kumncedisi wokukhathalela ngomboniso ozwakalayo kunye nobonwayo obonisa ukuba ngubani ovela kwi-alamu.
Ukudibanisa ukukhusela kwakho ukuwa kunye neemfuno ezichasayo. Yongeza iinkcukacha ezingenasiphelo ezingenazintambo kwiinkqubo ezifana neonesi zee-call (I-OMG433-NC), amacwecwe omgangatho, kunye neenjini zokuhamba (OMG433-MS).
Isebenza ngamaqhosha omnxeba angenazingcingo omnxeba (i-OMG433-NC), imethi yomgangatho, iiphedi zebhedi, iiphedi zosihlalo, kunye neenzwa zokuhamba (OMG433-MS).
I-Central Monitor ingasetyenzwa kwisikhululo somongikazi ukuze uqaphele abanomdla xa abahlali befuna uncedo.
Izilwanyana kwizikhululo zabongikazi okanye enye indawo ephakathi kunye nokubonisa kubonisa ukuba ngubani ohlala kwi-alamu.
Umncedisi ukwaziswa ngokufanayo kumncedisi womncedisi.
Inkinobho yefowuni inokuvumela umhlali ukuba abize umnakekeli nganoma naluphi na ixesha, ukuvula iqhosha lokutshintshela umyalezo kwi-Central Monitor kunye nomncedisi wokukhathalela ngokukhawuleza, unokwenziwa kwi-headboard okanye igqoke nge-lanyard.
5288 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje